विद्यार्थीले बनाए स्पेशल च्यवनप्रास – Rajmarg Online
विद्यार्थीले बनाए स्पेशल च्यवनप्रास
तुलसीपुर, माघ २९ । दाङको विजौरीमा रहेको जनता विद्यापीठका उत्तरमाध्याममा दोस्रो र तेस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुले स्पेशल च्यवनप्रास डेढ महिनाको अवधीमा तयार पारेका छन् । दाङको विजौरीमा मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त स्पेशल च्यवनप्राश सार्वजनिक गरीएको हो ।
क्याम्पसका प्रार्चाय माधव अधिकारीको अध्यक्षता तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेको प्रमुख आथित्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सो अवसरमा बोल्ने वक्ताहरुले यो दाङको गौरवको विषय भएकाले अब यस प्रकारका च्यवनप्रासलाई टेष्ट गरी उत्पादनमा जोड्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले शिक्षा ग्रहण मात्र होइन, उक्त शिक्षाबाट पनि वस्तु उत्पादनमा लागि पर्ने र यसलाई बजारीकरण गर्न सकिए मात्रै यो आर्युवेद शिक्षाको महत्व बढ्ने बताएका थिए ।
५४ प्रकारका जडिबुटीबाट तयार गरीएको च्यवनप्राशमा विभिन्न रसायनहरुको पनि मिश्रण गरिएको बताइएको छ । अधिकांस जडिबुटी भारतबाट ल्याउन परेकाले पनि यहाँको मुल्यमा केही कम पर्न गएको विद्यार्थीहरुको भनाई रहेको छ । १२० किलो उत्पादन गरिएको उक्त स्पेशल च्यवनप्रासमा प्राध्यापक डा. सुनिल कुमारको प्रयास र विद्यार्थीहरुको लगनशिलताले ९० हजार लागतमा बनेको विद्यार्थीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रिय आर्युवेदका प्राध्यापक विशेषज्ञ डा. सुनिल कुमारले वर्तमान समयमा च्यवनप्रासलाई औषधी तथा खाद्यान्न दुबैको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । कतिपयले चिसोबाट बच्न, कसैले तौल बढाउन, छाला चाउरी पर्न नदिने हेतुले प्रयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सबै भन्दा धेरै अंश अमलाको रहेको भन्दै अमला फलहरुको राजा रहेको बताउनुभयो । पृथ्वीमा भएका भिटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत मध्ये सबै भन्दा धेरै अंश हुने अमला रहेको भन्दै उहाँले ४ वटा सुन्तलाबाट प्राप्त हुने भिटामीन एक वटा अमलाबाट प्राप्त गर्न सकिने समेत बताउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी घनश्याम पाण्डेले अब यस क्षेत्रमा आर्यूवेदको संम्भावना रहेकाले यहाँका जडिबुटी टनका टन छिमेकी मुलुकहरुमा गैरहेको भन्दै यसलाई रोक्न यही उत्पादनमा आफु लागि पर्ने बताउनुभयो । यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक डा.डिन संजय बस्नेटले अब यस क्षेत्रलाई आर्युवेदको हव बनाउन सकिने प्रचुंर सम्भावना रहेको भन्दै यसका लागि सम्बन्धित निकायले पहल कदमी थाल्न आग्रह गर्नुभयो ।
सो अवसरमा विद्यार्थी दिपा रावत, दिनेश प्रसाद आर्चाय लगायतकाले बाल्नु भएको थियो । आर्युवेद विभागका कार्यक्रम संयोजक डा. मनोज अधिकारीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजिकरण जनता विद्यापीठका सहायक प्रसाशक विरेन्द्र चन्दले गर्नु भएको थियो ।